Ụmụaka YouTube rutere Spain na Julaị 13 | Androidsis
Afọ abụọ gara aga Chris Lacy, onye nrụpụta Link Bubble ma ọ bụ Action Launcher, wetara anyị nnukwu echiche dịka ngwa ịnwe niile na-achịkwa ọdịnaya playable site na ngwa emere maka umuaka nke ụlọ. Hometube bụ ngwa ahụ ma ọ bụ nnukwu ihe ọzọ mgbe anyị na-eche ka Kidsmụaka YouTube ịda na mba anyị n'oge ụfọdụ.
Oge ahụ abịala ma site na July 13, anyị ga-enwe Kidsmụaka YouTube arụ ọrụ zuru oke na Spain maka ọ theụ nke nta na nke kachasị nke ụlọ. Otu n'ime uru ya bụ interface dị mfe nke ga-enyere ụmụaka aka iji ọwa mee ihe n'ụzọ doro anya maka ha ma si otú a nwee ike ịnweta nnukwu ọdịnaya ọdịnaya, nke bụ etiti ọrụ a.
Kidsmụaka YouTube na-agbasa ọdịnaya ya n'ime ụlọ akwụkwọ ọta akara na ụlọ akwụkwọ. Ọ na-nwere ụfọdụ-akpali nnọọ mmasị nhọrọ dị ka ojiji nke ngụ oge, asụsụ na ndepụta okwu. N'ịga n'ihu ọrụ nke ndị nne na nna ga-achịkwa, ha ga-enwe ike hazie paswọọdụ iji dozie ntọala ha hụrụ dị mkpa maka ụmụ ha.
Anyị na-ekwu maka ngwa nke ga-enye ohere ịnweta ụdị ọdịnaya dị iche iche maka umuaka dika Sesame Street, Pepag Pig or Pocoyo. Also nwekwara nhọrọ nke ịnweta ụdị ọdịnaya ndị ọzọ, mana mgbe niile ka ị na-eme atụmatụ maka ụmụaka.
Ngwa nke nwere ike ịbụ ejiri ya na Chromecast iji debe ọdịnaya gị na ihuenyo buru ibu dị ka nke anyị nwere n'ime ime ụlọ. Ebumnuche YouTube na-atọ ụtọ nke na-esote ntinye ya na mba ndị dị ka United States ma ọ bụ Mexico na nke ahụ ga-abụ otu n'ime ọrụ ụmụ gị nwere ike iji mee ihe mgbe ha nọ n'ụlọ iji nweta ọdịnaya ọdịyo dị ukwuu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Julaị 13 bụ ụbọchị ntọhapụ na Spain maka Spainmụaka YouTube